Nguva Yekutangisa Yakachena iyo Email Kushambadzira Chirongwa | Martech Zone
Nguva Yekutangisa Yakachena iyo Email Kushambadzira Chirongwa
Muvhuro, April 16, 2012 Wednesday, April 11, 2012 Lavon Tembere
Ndiyo nguva yegore zvakare. Mazuva akareba uye mamiriro ekunze akanaka. Vanhu vanowanzo tora mukana wenguva yechirimo kuti vakwanise kuchenesa dzimba dzavo kubva kumusoro kusvika pasi. Ndoziva ndatoita yakachena yakachena imba yangu yekuzvininipisa. Haisi yakaipa zano rekushandura hutsanana kune yako email email chirongwa. Heano mamwe matipi ekuchenesa echirimo:
Tsvina! Tora nguva yekukorobha zvinyorwa zvako chaizvo. Tsvaga kuti ndiani asisiri kuita mukutumira kwako. Ini ndingadai ndisina kuraira kuvadzima, asi pamwe ndichivaendesa kuchikamu chavo chavanogona kumisikidza neyakaitazve musangano wekubata. Izvi zvinozorodza yako email yekutengesa runyorwa uye zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti uri kungotumira maemail ako kune avo vanonyoresa vanoda kuagamuchira.
Hupenyu Hutsva. Ini ndinogara ndichida muChitubu apo maruva anotanga kutumbuka zvakare - zvinogara zvakanaka! Izvo zvinogona kutaurwa here kune ako email makwikwi? Kana zvisiri, tora nguva yekuvandudza dhizaini yako. Kunyangwe iwo akanaka, kana wanga uchingoshandisa iwo iwo dhizaini kwegore - inogona kunge iri nguva yekuyedza kutaridzika kutsva. Gadzira hunyanzvi, saka kana vanyoreri vakagamuchira mameseji ako vanoshamiswa nekunaka kwemaemail ako!
ChiPolish. Kuchenesa kwechirimo mukana wekutarisa mametric ako. Semushambadzi weemail, ndine chokwadi chekuti urikutoita izvi kare, asi kwazvo vatarise. Ongorora kuti uone kuti ndezvipi zvemukati zvavakanyora zvakanyanya kune vako. Iwe unogona kuda kuyedza kutarisa pane izvi uye kugadzirisazve maemail mashoma kuti uone kana iwe uchiwana mhinduro imwechete kana zvirinani!
Edza Chinhu Chitsva. Ini ndinowanzo shandisa yangu yekuchenesa nguva yemwaka semukana wekugadzirisa nzvimbo mumba mangu - kuyedza gadziriro nyowani kuti ndione iyo seti-yandinofarira zvakanyanya. Pamwe inguva yekuti iwe uedze chimwe chinhu chitsva neyako email yekushambadzira chirongwa? Sekureva kwaMerkle "Tarisa Kubva kuDhijitari Inbox" muna 2011, "55% yeavo vane nharembozha dzinogoneswa neInternet vanoshandisa iyo kutarisa yavo email account." Pamwe iwe wapinda munzira neako eemail mishandirapamwe. Usagare ipapo! Edza kutarisisa nharembozha kana ndimo mune vateereri vako kana mameseji ekunyorera? Chero chinhu chekupa yako email mishandirapamwe zvishoma oomph mumwaka mutsva!
Unoda rubatsiro kutsvaira maemail? Svikira kune email email Marketing consultants pa Delivra. Isu tinofara kukweretesa ruoko rwekunatsa chitubu!
Tags: kuchenesaContent MarketingEmail MarketingListszvikamuSubscribers
Split Kuyedza Ad Dhizaini Pfungwa
Kuronga, Dhizaini, uye Kugonesa Webhusaiti
Apr 16, 2012 pa 4: 43 PM
Ino inguva huru yekuchenesa yako email rondedzero uye kune chimwezve chikonzero chekuita kudaro nevameseji vevashandi veemail kusefa izvo zvavanofunga kuve "zvisingafadzi" mameseji. Kuchenesa ako ekare maemail kero uye vasiri-vanopindura kunobatsira yako email nzira zvakanyanya! Tarisa chinyorwa ichi uone rumwe ruzivo nezve marongero matsva http://spotright.com/digital-marketing/spotiq-segment-now/